မြတ်လေးငုံ: ၈၈မျိုးဆက်နှင့် အခြားလူမှုအဖွဲ့အစည်း၅၈ ဖွဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သော လူ့အခွင့်အရေး နှင့် မညီမျှသည့် ၊ မတရားသည့် အခြေခံဥပဒေ ကို ဆန့်ကျင်သော ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲ မဟာဗန္ဒုလပန်းခြံလမ်းထောင့် မြို.တော်ခန်းမရှေ. (ယနေ့ညနေ ၃ နာရီမှ ၅ နာရီအထိ)
၈၈မျိုးဆက်နှင့် အခြားလူမှုအဖွဲ့အစည်း၅၈ ဖွဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သော လူ့အခွင့်အရေး နှင့် မညီမျှသည့် ၊ မတရားသည့် အခြေခံဥပဒေ ကို ဆန့်ကျင်သော ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲ မဟာဗန္ဒုလပန်းခြံလမ်းထောင့် မြို.တော်ခန်းမရှေ. (ယနေ့ညနေ ၃ နာရီမှ ၅ နာရီအထိ)
"ဒီအခမ်းအနား ဘာကြောင့် ကျင်းပရသလဲ ဆိုရင် မြန်မာဘောလုံးအသင်းလို မဖြစ်ဖို့၊ မြန်မာဘောလုံးအသင်း ဘာဖြစ်လဲ အားလုံးသိပြီးသား၊ ဘာဖြစ်လို့လဲ စဉ်းစားကြည့်တဲ့ အခါကျတော့ နိုင်ငံခြားသား နည်းပြတစ်ယောက်ကိုပဲ လက်ငြိုးထိုးတယ်၊ သူ့ကိုပုံချတယ်၊ အဲ့ဒါ မလုံလောက်ပါဘူး။ တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေက တာဝန်ခံဖို့ လိုပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသား ဒိုင်လူကြီး တစ်ယောက်ထဲက ခြယ်လှယ်သွားတယ်လို့ စွပ်စွဲဖို့ မလုံလောက် ပါဘူး။ နောက်ထပ် နောက်ထပ် တာဝန်ရှိသူတွေ အများကြီးရှိပါ သေးတယ်"
Posted by မြတ်လေးငုံ at Monday, January 06, 2014
ဟင်္သာတတက္ကသိုလ်က ဘွဲ့ယူမည့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူတွေက...
နိုင်ငံခြားသား အဖြစ် ခံယူထားသူများကို နိုင်ငံသားအြ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစြု...
အဖွဲ.ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခ...
၈၈မျိုးဆက်နှင့် အခြားလူမှုအဖွဲ့အစည်း၅၈ ဖွဲ့ ပူးပေါင...